Guddiga doorashooyinka oo dalab xasaasi ah u gudbiyey R/Wasaare Rooble + Sawirro - Bulsho News
Guddiga doorashooyinka oo dalab xasaasi ah u gudbiyey R/Wasaare Rooble + Sawirro
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa qaabilay xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka (FEIT), isaga oo kala hadlay arrimaha doorashooyinka ee 2021-ka iyo sidii loo dardar-gelin lahaa.
Ugu horreyn guddiga doorashooyinka dalka ee heer federaal ayaa ra’iisul wasaaraha u gudbiyey warbixin ku aadan halka ay marayaan doorashooyinka iyo dardar-gelintooda.
Sidoo kale guddiga ayaa Rooble u gudbiyey codsi gaar ah oo la xiriira fududeynta howlaha doorashooyinka ee ka billowday dalka.
Qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra’iisul wasaaraha ayaa looga hadlay kulankan, waxaana lagu sheegay inuu Rooble ka jawaabayo codsiyada ka yimid guddiga doorashada.
“Ra’iisul Wasaaraha XFS Maxamed Xuseen Rooble ayaa la kulmay xubno ka tirsan Guddiga Maamulka Doorashooyinka Heer Federaal (FEIT) oo warbixin ka siiyay Halka ay marayaan howlaha Doorashada, iyadoo uu Ra’iisul Wasaaruhu ka jawaabay codsiyo la xiriira sidii loo dardargelin lahaa howlaha doorashooyinka dalka,” ayaa lagu yiri qoraalka Xafiiska Rooble.
Kulankan waxaa ka horreeyey shir kale oo uu ra’iisul wasaaruhu la yeeshay ururada bulshada rayidka, kaas oo looga hadlay doorashooyinka iyo xiisadda ka taagan dalka.
Doorashooyinka Soomaaliya ayaa haatan maraya meel xasaasi ah, waxaana maanta HirShabelel ay qabaneyso kuraas ka mid ah kuwa Aqalka Sare ee yaalla Jowhar.
CDC endorses COVID booster for millions of older...